'उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन' कृष्णप्रसाद फुंयाल, अध्यक्ष- फुटवेयर मेनुफेक्चर्स एशोसियसन
जनतापाटी सोमवार, श्रावण ५, २०७७, ०६:२०:०० मा प्रकाशित
कोरोना आतंकपछि पछि धेरै मानिस घरमै बसे, जुत्ता चप्पल पनि थोरै मात्र फाटे, त्यसले गर्दा लकडाउन अवधिमा मात्र होइन, अझै केही महिना जुत्ता चप्पलको खपत नहुने भयो होइन ?
कोरोना र लकडाउनका कारण जुत्ता चप्पल क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । जुत्ता चप्पलको कुरा गर्ने हो भने अहिले विक्री वितरण लगभग ठप्प छ । विदेशबाट आउन रोकिएको छ, केही मात्रामा निर्यात हुन्थ्यो, त्यो पनि ठप्प छ ।
तर, अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । किनकी समस्या जुत्ता, चप्पल क्षेत्रमा मात्र वा नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापीरुपमा सृजना भएको हो । अरु तिरको र हाम्रो समस्या के हो भने हामी भावनामा बग्छौं र तत्काल प्रतिकृया जनाउंछौं । तर, पछि त्यो कुरा विर्सिहाल्छौं । भूकम्पको बेला हामी नेपालीहरु केही समय निकै सचेत जस्तो देखियौं । नाकावन्दीको बेला पनि त्यस्तै देखियो । तर, पछि हामीले सबै पिडा विर्सियौं र अवस्था जस्ताको तस्तै भयो । अर्थात् आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने कुरा विर्सिएर आयातलाई मात्रै जोड दिन थालियो ।
अहिले कोरोनाले पनि हामीलाई फेरि पाठ सिकाएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ, आयातमूखी होइन, उत्पादनमूखी भएर काम गर्नु पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । यो पाठलाई मनन गरेर काम गर्ने हो भने अहिलेको समस्या चुनौति होइन, अवसर हो । त्यसबाट आत्तिने होइन, पाठ सिकेर प्रतिफल लिने गरि काम गर्ने हो भने लकडाउन र कोरोनाको कारण सृजना भएको अवस्थाबाट धेरै नै फाइदा लिन सकिन्छ । मुख्य कुरा हाम्रो सरकार, कर्मचारी नेतृत्व र सिंगो नेपाली जनताले के पाठ सिक्छौ र अब कसरी काम गर्छाैं भन्ने हो ।
यस्को अर्थ जुत्ता चप्पल क्षेत्रमा कुनै असर परेको छैन ?
मैले भनिसकें, असर नपर्ने त कुरै भएन । असर सबैतिर परेको छ । तर, असर परेको छ भनेर आत्तिएर त भएन नी । त्यसबाट पाठ सिकेर आयातमूखी होइन, उत्पादनमूखी भएर जानु पर्छ भन्ने कुरा हो । हामी व्यापारलाई जोड दिन्छौं कि उत्पादनलाई जोड दिन्छौं भन्ने कुरा हो । अब उत्पादनलाई जोड दिने गरि नीति बनाएर काम गरियो भने अहिलेको संकट अवसर हो, त्यसबाट आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने मेरो भनाई हो ।
नेपालमा जुत्ता चप्पलको माग र आपूर्तीको अवस्था कस्तो छ ?
भान्सामा लगाउने, वाथरुममा लगाउने, गार्डेनमा लगाउनेदेखि लिएर पार्टीहरुमा लगाउनेसम्मका सबै खालका जुत्ता, चप्पलहरु गरि करिब ९ करोड जोडी खपत हुन्छ । त्यसमध्ये नेपाली उत्पादनले करिब ३५ प्रतिशत धानेको छ भने करिब ६३ प्रतिशत अर्थात करिब ७ अर्व बराबरको जुत्ता चप्पल भारत र चीनबाट आउंछ । त्यस्तै करिब ५० लाख जोर जुत्ता चप्पल नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छ । तर, कोरोना महामारी पछि आयात, निर्यात दुवै ठप्प भएको छ ।
उत्पादन र बजारीकरण पनि ठप्प भएको छ । साना ठूला गरि करिब १५ सय जुत्ता चप्पल उद्योग ठप्प छ । करिब ५० हजार कामदार, कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए, ती सबै बेरोजगार भैरहेका छन् । तिनीहरुको अवस्था के हुने हुने भन्ने निश्चित छैन । स्थिति अन्यौलपूर्ण छ । हामीले हिजो आइतबार मात्रै उद्योग राज्यमन्त्रीलाई भेटेर सबै अवस्थाको जानकारी गराएका छौं । उहांले सरकारले गंभिरतापूर्वक काम गर्छ भन्नुभएको छ, हेरौं के हुन्छ । मैले अघि पनि भनिसकें अलिकति गम्भिरतापूर्वक पाठ सिक्ने हो भने धेरै काम हुनसक्छ, मुख्य कुरा सरकारले कसरी काम गर्छ, हामी कसरी काम गर्छाैं भन्ने हो ।
तपाईहरुको छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन आउंदैछ, तपाई कस्लाई जिताउन लागिरहनु भएको छ ?
कस्ले जित्ने, कस्ले हार्ने भन्दा पनि हाम्रो सरोकार महासंघ कस्तो हुने भन्ने हो । देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ र अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ । त्यसको अर्थ अबको समय आर्थिक क्रान्ती, आन्दोलनको हो । यस्तो समयमा नीजि क्षेत्रबाट आर्थिक क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका शसक्त हुनै पर्छ । तर, विगत केही समयदेखि महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । सबै मनमुटावहरु विर्सेर सबै उद्योगि व्यवसायीको हित गर्ने गरि शसक्तरुपमा आवाज उठाउनु पर्नेमा महासंघ आफै विवादमा रुमल्लिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले महासंबाट के अपेक्षा गर्ने ? भन्ने प्रश्न देशव्यापाी उद्योगि व्यवसायीहरुबीच प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो सरोकार व्यक्ति होइन, बलियो उद्योग वाणिज्य महासंघ हो ।
पर्यटनको विकासबाटै प्रदेशको समृद्धि सम्भव : मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६, ०८:३८:००
मृत्युदण्डको फैसला ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरियो - मुशर्रफ बिहिवार, पुष ३, २०७६, ०८:२४:००
अष्ट्रेलिया जाने नेपालीलाई अब झनै कठिन शुक्रवार, आश्विन १७, २०७६, ०५:५१:००